Sc @ ut: Ngwaọrụ maka ụmụaka nwere Down Syndrome | Site na Linux
Sc @ ut: Ngwaọrụ maka ụmụaka nwere Down Syndrome
obi ike | | Aplicaciones
O di nwute, n'ihi ihe di iche, enwere oge mgbe ichoro imu nwa, otu n'ime nkpuru omumu nwere ike inwe kromosom iri abuo na abuo kama 24.
Mgbe gametes abụọ a gbakọtara, ndị chromosomes gbakọtara na-eme ngụkọta nke 47. Enwere ọtụtụ chromosomopathies, mana mgbe etinyere chromosome a na 21, ihe anyị na-akpọ Trisomy 21 o Ọrịa ala.
Ọfọn, na Universidad de Granada (UGR) emeela ngwa a na-akpọ Sc @ ut, nyere aka maka ụmụaka ndị a.
Ihe omume a dabere na iji eserese eserese nke kwekọrọ na mmegharị na okwu, na-ezere nchekasị na nkụda mmụọ enwere mgbe nkwukọrịta anaghị aga were were, dị ka Down Spain si kwuo.
O nwekwara ike inyere ndị nne na nna na ndị nkuzi aka igosipụta arụmọrụ nke ụmụ akwụkwọ a.
Enwere ike iji Sc @ ut na komputa, PDAs na Nintendo DS consoles.
Ibe oru ngo: Sc @ ut
Isi: Ka anyị jiri Linux
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Sc @ ut: Ngwaọrụ maka ụmụaka nwere Down Syndrome
oke ozi !!! Enwere m onye ikwu m na Down, mụ na ndị mụrụ ha ga-atụle okwu a !!!!
Ọ dị mma ịmara na mahadum anyị na-arụkọ ọrụ na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ma n'otu oge ahụ rụọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze. Olile anya na oru ngo a bia na nkpuru.
PS: Na-ebughi ebumnuche nke iwe, n'echiche m kama ị ga-eji gametes, ebe gonads bụ akụkụ ebe a na-emepụta gametes (n'ihe gbasara mmadụ, testes na ovaries), ebe gametes (spam na ovules, ọzọ na ụdị anyị) bụ ihe na-ebute ọrịa a jọgburu onwe ya.
Zaghachi Javi Hyuga
Nke ziri ezi, enwere m mgbagwoju anya
Obi ike, n'isiokwu a ị gbanweela echiche m banyere gị. Ọ kpọrọ ihe. Echere m na ị bụ obere nwa nwoke na-esekarị okwu, ma ahụrụ m na ihe m kwuru adabaghị. I nwere ihe gi, mana site na izipu ihe dika nke a, earned nweela nkwanye ugwu.
Ezigbo isiokwu article
Hahahaha m zoo na ndụ n'ezie, lee, abụ m obere nwa na-ese okwu na-ewepụta onye ọbịa ọjọọ.
Otu edemede echeghị m na ọ ga-agbanwe ọtụtụ, mana ọ masịrị m.
ọ bụrụ na ị kpara ụdị agwa a oge niile ... uff
mana echegbula, otu matures ka afọ na-aga 🙂
Anọrọla m otu ahụ, nwatakịrị nwoke dị afọ ise agbanweela, emeela m agadi maka nke ahụ
Maka nke ọma ma ọ bụ nke ka njọ, ị ga na-agbanwe agbanwe. Ọ ga-agbanwe uto gị maka nri, ụmụ nwanyị, ihe omume ntụrụndụ, ... dịka ahụ gị ga-agbanwe, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Ma ị maghị ihe ahụmịkọtara oge akara ...
¬ nke ahụ bụ ihe ọzọ
a kọwara nke ọma banyere chromosomes na ndị ọzọ, amaghị m, ọ masịrị m nke ukwuu
Kedu ihe na-eme Microsoft?
Nkuzi: Learningmụta iji Veksize na Inkscape